Nice Help | Ganacsigaygu ma sameyn karo mushahar, maxaan sameyn karaa?
Ganacsigaygu ma sameyn karo mushahar, maxaan sameyn karaa?
Barnaamijka Ilaalinta Mushaharka
Loogu talagalay Sanduuqa amaahda Loo-shaqeeyaha Yar (Bank of North Dakota)
Amaahda SBA Express Bridge
Barnaamijka deeqda dayn cafinta SBA
Loogu talagalay Amaah Musiibada Dhaawaca Dhaqaalaha ee SBA
4R Mashruuca - Caawinta ganacsiyada yaryar ee North Dakota inay ku soo noqdaan Ganacsiyada
Tilmaanta Ganacsiga Yaryar & Kheyraadka amaahda
Kheyraadka Bilaashka ah ee Loogu Talagalay Ganacsatada Yaryar
Ganacsiyada: Si Ammaan ah Ku Noqoshada Shaqada (Minnesota)
Shirkadaha Teknolojiyadda Lacagta ah ee loo yaqaan 'Paypal & Quickbook' ayaa hadda ku hawlan amaahda Barnaamijka Ilaalinta paycheck
Waxaan ku shaqeeyaa Samafal
Ma haysto shaqaale
Ganacsigeygu wuxuu ka yar yahay 1 sano jir
Amaaho Dhaawac Dhaqaale SBA (EIDLs)
Maamulka Ganacsiga Yaryar
Amaahdan ayaa bixin doonta illaa $ 10,000 oo deeq maaliyadeed ah.
EIDL-yada waxaa loogu talagalay inay siiyaan kaalmooyin dhaqaale ganacsiyadii xilligan la soo gudboonaaday luminta ku meelgaarka ah.
Hore u bixinta amaahdan ma aha in dib loo bixiyo.
Gudaha ka eeg xaq u yeelashada.
Halbuurka deeqda ganacisyada yar yar ee Go Fund Me
Boga Go Fund Me
Haddaad kor u qaaddo $ 500 oo loo maro GoFundMe, waxay kugula garab dhigi doonaan deeq ah $ 500.
Barnaamijka COVID-19 PACE Recovery (CPR)
Ganacsiyada 500 ama kayar shaqaale: Xaddiga amaahda ugu badan waa $ 5,000,000 ama lix bilood kharashaadka hawlgalka iyo dulsaarka
Ganacsiyada 501 shaqaale ama in ka badan: Xaddiga amaahda ugu badan waa $ 10,000,000 ama lix bilood oo kharashaadka hawlgalka ah iyo dulsaar
Xaddiga ugu badan ee magaalada laga soo gato ee laga soo bilaabo Bangiga ND waa $ 500,000 halkii sannium, halkii amaahdii. Dayn Bixiye waxaa lagu qeexaa shaqsi ahaan, shirkad, shirkad deyn xadidan leh, iskaashato, urur ama wixii isku jira midkoodna haddii ay jiraan lahaansho caadi ah.
Lacag bixinta waxaa loo isticmaali karaa:
Taageer baahiyaha ka shaqeeya raasamaal ee ganacsi ee gobolka North Dakota
Joojinta amaahda buundada ee COVID-19 ama bixinta deynta kaarka deynta waxay asal ahaan timid ama ka dib Maarso 13, 2020. Lacagtaan kama badan karto 20% lacagta ugu badan ee amaahda.
Nofeembar 30, 2020
Deeqaha Awoodsiinta ee PayPal ee loogu talagalay Barnaamijka Ganacsiyada Madowga.
Ururka Fursadaha Ganacsiga
Hesho lacag dhan $ 10,000 doolar
Miisaaniyadda waxaa loo isticmaali karaa: kacsanaanta, dayactirka burburka hantida, daboolaya kharashyada hawlgalka, alaabada iyo adeegyada cusub, suuq gaynta macaamiisha
Ganacsiga Dhamaan iyo Tartanka Deeqda COVID-19
Hal mar oo deeq ah $ 10,000
Haddii ganacsi aan loo xushay kaalmada degdegga ah ee COVID-19, waxay wali tixgelin siin doonaan $ 50,000 Meheradda oo ah deeqda oo dhan oo la qaybiyo Noofambar 2020
Dhamaan codsadayaasha deeqda waxay heli doonaan marin u helida fursadaha kobaca ganacsiga iyo taageerada bulshada Hello Alice
Luulyo 16, 2020
Deeqaha Gargaarka Ganacsiga Yaryar ee Minnesota
Shaqada & Horumarinta Dhaqaalaha ee Minnesota
Barnaamijkani wuxuu $ 10,000 oo deeq ah siin doonaa ganacsatada ay leeyihiin iyo ganacsatada gobolka Minnesota ee muujin kara dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhasha dillaaca COVID-19. Isugeyn $ 60.3 milyan ayaa loo heli karaa abaalmarinnada deeqda kuwaas oo lagu dooran doono kombiyuutar-ku-saleysan, nidaamka xulashada aan kala sooca lahayn.
Abaalmarinada ayaa waxaa bixin doonta oo maamuli doona ururada samafalka ku saleysan gudaha iyo gobolka ee aqoonta u leh. Lacagaha deeqaha ee ay helaan ganacsiyada shaqsiyadeed waxaa loo isticmaali doonaa raasamaal shaqeed si loogu taageero kharashyada mushahar bixinta, kirada, bixinta amaahda guryaha, biilasha adeegyada, iyo kharashyada kale ee la midka ah ee dhacay ama dhacay illaa Maarso 1, 2020, ganacsiga caadiga ah. Kuwani waa deeqo oo dib looma bixin doono.
Luulyo 2, 2020
Barnaamijka Ilaalinta Mushahaarka ee SBA (PPP)
Barnaamijka Ilaalinta Mushahaarku waa amaah loogu talagalay in lagu siiyo dhiirrigelin toos ah ganacsatada yar yar si ay shaqaalahooda ugu sii hayaan mushaharka.
SBA waxay cafin doontaa amaahda haddii dhammaan shaqaalaha lagu hayo mushaharka muddo sideed toddobaad ah oo lacagta loo adeegsado bixinta mushaharka, kirada, dulsaarka deynta, ama adeegyada.
Fiiri u-qalmitaanka gudaha.
Daymaha aafooyinka ee sanduuqa sida guud loo ururiyo ee Wefunder
Wefunder waa gunta ugu weyn ee maalgalinta: in kabadan 130M ayaa la maalgaliyay!
Wefunder waxay dadka u oggolaanaysaa inay taageeraan meheradaha ay daneynayaan iyaga oo sameeya maalgashi ama deyn ugu yaraan $ 100.
Iyada oo laga jawaabayo COVID-19, Wefunder waxay abuurtay heshiis wadaag dakhli oo loogu talagalay maalgelinta degdegga ah oo la bedbeddelayo oo ganacsi yar-yar.
Eeg sida loo dalbado gudaha.
Amaahda Buundada Degdega SBA
Illaa $ 25,000
Deg deg u soocelin
Waxa lagu bixin doonaa si buuxda ama qayb ahaan iyadoo laga baxsho amaahda EIDL
COVID-19 Sanduuqa Taageerada Qoyska
United wayga ku taalada eeriyada Dickinson
Deeqaha ayaa wadarta ah illaa $ 300 qofkasta oo kamid ah bulshada waana inuu ubaahanyahay sidii looga hortagi lahaa faafida viruska.
Deeqda ayaa u furan wax kasta oo samafal ah oo ka jira degmooyinka Stark, Dunn, iyo Billings waana la heli karaa illaa inta maalgelinta la dhammaystirayo.
Waxa ugu dambeeya ee aan rabno waa in cunta qaybinta, hoyga, ama bixiyaha WIC inuu ka fikiro laba jeer nadaafadda ama fayodhowrka maxaa yeelay kuma jiro miisaaniyadda.
Eeg mudnaanshaha kale gudaha.
Deegaanka Barnes Sanduuqa Caawimaada COVID-19
Haayada Bulshada Sheenne Valley
Sanduuqaani wuxuu ku deeqi doonaa deeqaha deg degga ah ururada samafalka ee Gobolka Barnes oo siiya adeeg toos ah kuwa aadka ugu baahan inta lagu jiro faafa, adeegyada caafimaadka dabeecadda, iyo baahiyaha gurmadka iyo daryeelka caafimaadka.
Hay'adaha samafalka cashuur dhaafka ah ee IRS, unugyada Dowlada iyo / ama kaniisad ama iskuulada laga dhaafay canshuur dhaafku way uqalmaan inay codsadaan.
Sanduuqa Waxqabadka Degdegga ee Souris Valley
Haddii wakaaladdaada si toos ah ama si aan toos ahaynba u saameysay oo ay dhibtoonayaan, fadlan guji "Nonprofits" bogga ku xiran si aad u hesho foomka dalabka deeqda.
Open Road Allaince Caabuqa COVID-19 Barnaamijyada Amaahda
Open Road Alliance waxa ay soo bandhigi doontaa afar alaabo oo deyn ah ururada ay saameysay COVID-19:
Dhacdooyinka Dakhliga Lumiyay
Dardargelinta Lacagaha Gurmadka ee Imaatinka ah
Iskaashi maalgashi lagu taageerayo Shirkadaha Bulshada
Amaahaha Deep Impact
Barnaamijkani wuxuu siiyaa la talin ganacsi, tababaro iyo ilaha waxbarasho ganacsatada yar yar ee soo maray wax saameyn ah ama isbeddelo howlahooda caadiga ah sababtuna ay tahay COVID-19.
Barnaamijka Dammaanad Qaadka Ganacsiga Yaryar ee Minnesota
Waaxda Shaqada iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Minnesota
Barnaamijku wuxuu bixin doonaa dammaanad 80% illaa ugu badnaan $ 200,000.
Isticmaalka amaahda ee la ogolyahay waa inay kujiraan gobolka Minnesota oo ay kujiraan mashiin ama qalab iibsi, dayactir, ama dayactir; kharashyada la xiriira u soo guurista ama gudaheeda gudaha Minnesota; iyo raasumaal shaqaalaynta markii raasamaalka shaqada lagu xaqiijiyo hanti go'an markay suurtagal tahay.
Dafcada Dadka Midbaka Ee IFundWomen
helitaanka raasamaal iyada oo la adeegsanayo isku-imaatinno iyo deeq-bixinno!
tababarayaal iyo la taliyayaal khibrad wadaag ah!
shabakad gaar loo leeyahay oo ay iska kaashadaan oo kuna damaashaadaan!
Deeqda Guud ee dadka Midabka Ee IFundWomen
IFundWomen waxay bixisaa tababar ku xeel dheer Ururinta dhaqaale laga soo ururiyo dadbada , oo ka yimid dad runtii hore usoo ururiyey.
Tababarayaashu waa shaqaale wakhti-buuxa shaqeeya oo si buuxda ugu heellan inay kaa caawiyaan inaad maalgelin heshid
Tababar bilaash ah
Tababar gaar ah
Tilmaame-baraha IFundWomen Qaab-Ciyaareedka: Khariidadaha ka muuji istiraatiijiyadda ololahaaga ilaa dhamaadka ilaa dhamaadka.
Waxay bixiyaan dabacsanaan :
Maalgelin dabacsan: Waxaad haysataa wixii aad soo uruurisay, oo waxaad bilaabeysaa inaad hesho lacag raasamaal ah, taas oo ah lacag caddaan ah, isla markiiba koontadaada. Lama sugi ilaa ololahaagu ka dhammaado.
Taariikho dabacsan: Waad hagaajin kartaa taariikha bilowgaaga iyo dhamaadkaba inta aad ubaahantahay.
Abaalmarino is Bedbeddeli kara: Abaalmarino waad ku shubi kartaa iibinta, tirtiri kartaa kuwa aan iibinaynin, ama beddeli kara sawirrada iyo cinwaannada. Wax kasta oo lagu sameeyo abaalmarinta waa la beddeli karaa, xitaa ka dib marka ololahaagu bilowdo.
Hadaf dabacsan: Inta badan, uma baahnid inaad wax ka beddesho yoolkaaga, laakiin haddii aad u baahatid, waad ku beddeli kartaa IFundWomen.
& waxay kaloo bixiyaan fiidiyowyo xirfadeed iyo adeegyo wax soo saar hal abuur leh oo kaa caawinaya inaad sheegtid sheekadaada!
Faa'iidooyinka kale waxaa ka mid ah:
Deeqaha Bixinta-Bil -laha-Billaha ah: 20% dakhliga ka soo baxa khidmadaha caadiga ah ayaa dib loogu howl-galiyaa ololayaasha tooska ah ee goobta.
Helitaanka shabakad gaar ah oo 'Slack network' oo ah tababarayaasha IFundWomen iyo shaqaalaheena ganacsatada ah ee taageera ee kugu soo food leh.
ECourse Bilaash ah ee bilaashka ah ee 'Crowdfunding eCourse' ayaa ku baraya sida loogu guuleysto isku- urursiga min dhamaadka ilaa dhamaadka.
Keydso Sanduuqa Ganacsiga Yaryar
Waxay bixisaa $ 5,000 oo deeq ah ganacsiyada yaryar ee shaqaaleysiiya inta u dhaxaysa 3 iyo 20 qof, oo ku dhextaal beel dhaqaale ahaan nugul oo dhibaato dhaqaale ku soo gaadhay Faafida COVID-19.
Barnaamijka SBA Microloan
Kooxda Horumarinta ee Lake Agassiz
Qiyaasta xaddiga maalgelinta ee ganacsiyada yaryar ee cusub iyo kuwa hadda jira ee North Dakota.
Ganacsadayaasha u qalma waxay heli karaan ugu badnaan $ 50,000 oo loogu talagalay raasamaal shaqo, agab iyo qalab u baahan.
U Qaybiyay Digital
Sanduuqa Doonie wuxuu sameeyaa maalgelinno yar yar ganacsatada haweenka Madoow. Waxaa aasaasay maamulaha dijitaalka ah ee aan la qaybinin, Kathryn Finney, santuuqa waxaa loogu magac daray ayeeyadeed, Kathryn "Doonie" Hale, oo dhiirrigelisay safarkeedii ganacsigeed kuna dhiirrigelisay inay joogitaanka fagaaraha.
Tan iyo markii la aasaasay 5-tii Abriil, 2020, maaliyaddu waxay maalgelisay in ka badan 500 oo haween ganacsato ah oo madow ah.
Haayada Samafalka Ee hooyooyinka DIb wax utarka bulshada
Hooyooyinka Ganacsi ahaan
Deeqaha $ 500- $ 1,000 waxaa la siin doonaa ganacsatada ay hooyadu ku leedahay dhammaan warshadaha
Taageerada Qoraalada Deeqaha
Kaalmo helida ilaha maalgelinta ee ururkaaga
Bixinta adeegyada qoraalka iyo taageerada maamulka ee codsashada maalgelinta
Sanduuqa Maalgashiga ee Minnesota
Cabbirka abaalmarintu waxay kuxirantahay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin (laakiin aan ku ekayn) tartamada Minnesota, duruufaha dhaqaale ee maxalliga ah, shaqo abuurka iyo heerarka mushaharka. Dhammaan kharashyada iyo shaqaalaynta la xidhiidha kaalmada MIF ma dhici karto ilaa maalgelinta si rasmi ah loo oggolaado.
Deegaanka Cavalier JDA deeqda Kordhinta amaahda
Maamulka Horumarinta Shaqada Degmada Cavalier
Boondada Deynta Degaanka Cavalier
Sanduuqa Horumarinta Dhaqaalaha Canshuuraha ee Magaalada Langdon
Barnaamijka Dib-u-hagaajinta Bakhaarka
Dhiirrigelinta Ganacsiga ee Magaalada Forman
Kobaca Deegaanka Minot ee loo maro maalgashiga iyo iskaashiga (Sanduuqa MAGIC)
Shirkadda Horumarinta Deegaanka Minot
Lacagta Amaahda Horumarinta Bulshada
Golaha Qorsheynta ee Souris Basin
Haayada Horumarinta Praire west.
Horumarinta Galbeedka Prairie
Awoodda amaahda Maamulka Horumarinta Shaqada ee Degmada Renville
Maamulka Horumarinta Shaqada ee Degmada Renville
Deeqda Saxeexeeye Jirkaa JDA
Maamulka Horumarinta shaqada ee Wishek
Sanduuqa Boorsada Casaanka
Barnaamijka Gargaarka Cuntada ee Coronavirus (CFAP)
Waaxda Beeraha Mareykanka
Ogosto 28, 2020
Deeqaha Ganacsiga Yaryar ee Facebook